आन्दोलनरत सबैलाई जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको अनुराेध – ‘संयमित बनौं, सुरक्षित बनौं, जीवन अमुल्य छ’ – Upahar Khabar
आन्दोलनरत सबैलाई जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको अनुराेध – ‘संयमित बनौं, सुरक्षित बनौं, जीवन अमुल्य छ’
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:४८ June 12, 2020
केहि दिन यता देशका बिभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ । कोरोनाको नाममा १० अरब खर्च भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिज्ञको सुझाव बिपरित रोग पत्ता लगाउन उपयोगी नहुने RDT Kit को ब्यापक दुरुपयोग गरेको तथा केहि मन्त्रीको कारण कोरोना नियन्त्रण एबम आर्थिक शुशाशन कायम नभएको, क्वारेन्टाइन रोग सार्ने केन्द्र बनेको, स्वास्थ्यमन्त्रीले एकपटक पनि सिमाबर्ती क्षेत्रका क्वारेन्टाइन अवलोकन एवम् अनुगमन नगरेको, जनतालाई ठोस राहत एवम् सामाजिक सुरक्षाको योजना नल्याएको लगायत धेरै विषयमा हामी सबै असन्तुष्ट छौं । महामारीको बेलामा नेपालजस्तो गरिब देशले आर्थिक मितव्ययिता गर्ने, खर्च व्यापक कटौती गर्ने तथा भोलेन्टियर भएर देशको लागि योगदान गर्ने बेलामा केहि व्यक्तिको आर्थिक हालीमुहाली अक्षम्य छ ।
भारतको महाराष्ट्रमा डेढ महिना पहिले हजारौं मजदुरले प्रदर्शन गरेका थिए । अहिलेको अवस्था हेर्दा महाराष्ट्रमा संक्रमितको संख्या ९७६४८ पुगेको छ भने ३५९० जनाको मृत्यु भएको छ । जबकी चीनमा संक्रमितको संख्या ८३०५७ छ । महाराष्ट्रमा हिंजोमात्र ३२५४ जना संक्रमित भए भने १४९ जनाको मृत्यु भयो । त्यस्तै दिल्लीमा जुलाईको अन्त्यसम्म ५ लाख संक्रमित पुग्न सक्ने त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् ।
स्पेनमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी धेरै संक्रमित भएको र त्यसको केहि हप्तापछि आफन्तले शब हेर्न समेत नपाएको अवस्था आएको थियो ।
ब्राजिलमा भएको प्रदर्शनको कारण हजारौं संक्रमित भएको बताइएको छ । ब्राजिलले संक्रमितको संख्यामा अहिले अमेरिकालाई पछ्याइरहेको छ ।
जुलुसमा सामाजिक दुरी कायम नहुने, मास्कको प्रयोग सहि तरिकाले नहुने, अपरिचितको भीड हुने, हात धुने / स्यानिटाइजर प्रयोग नहुने भएकोले रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अध्ययनले देखाएको छ कि बिरोध प्रदर्शनमा चिच्याउने, नारा लगाउने, सिठी फुक्ने, खोक्ने आदि गर्दा संक्रमितको मुखबाट कोरोना भाइरसको लोड धेरै निस्किने र धेरैजना एकैपटक संक्रमित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
त्यहाँ हामी युवा संक्रमित भएमा हाम्रो घरमा रहनुभएका जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी लगायतलाई संक्रमण सरेर जोखिम धेरै बढ्छ ।
सहरी क्षेत्रमा लाखौँ जनाको बसाइ हुने तथा ठूलो समुहमा संक्रमण सर्यो भने संक्रमण अनियन्त्रित भएर हाम्रा अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यो महामारीको समयमा गर्ने बिरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेमा हामी सुरक्षित हुनेछौं । सामाजिक संजाल, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिको माध्यमबाट सामुहिक बिरोध हुँदा बिगतमा धेरै मन्त्रीले राजिनामा दिन बाध्य भएको हामीलाई अवगत नै छ ।
सरकारले आर्थिक अनुशाशन, पारदर्शिता, मितब्यब्यिता तथा जवाफदेहितालाई आफ्नो कर्तव्य ठानेर जनताका हरेक सरोकारलाइ इमान्दरपूर्वक ब्यबहारमा देखाउन सक्नु पर्दछ । कमीकमजोरी, अनियमितता तथा ढिलासुस्ती गर्ने जो कोहिलाई पनि पदमुक्त गर्ने, सक्षम व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिने, हरेक आर्थिक गतिविधिलाई नियामक निकायबाट अनुगमन गर्ने तथा जनतालाई रोग, भोक र आर्थिक समस्याबाट बचाउन सरकार क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।
यो विषम परिस्थितिमा सरकार, आम जनता तथा मिडिया एकताबद्ध भएर महामारीसंग जुध्नुको विकल्प छैन ।
कुवेतबाट आज १५० जना काठमाडौँ आउँदै